टेलिकमले सञ्चालन ल्याएकोआईपी टिभी हेर्न वार्षिक साढे २४ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने - Aarthiknews
टेलिकमले सञ्चालन ल्याएकोआईपी टिभी हेर्न वार्षिक साढे २४ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आजबाट आफ्नो आईपी टिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेलिकमले एनटीटिभी ब्राण्डमा फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) का माध्यमबाट आईपी टिभी हेर्नको लागि आम ग्राहकले वार्षिक १३ हजार दुई सयदेखि साढे २४ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने गरी प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
टेलिकमले आजबाट काठमाडौं उपत्यका र बनेपा सो सेवा शुरु गरेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । एफटीटीएच सेवाबाट भ्वाइस र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको टेलिकमले एनटीटिभी ब्राण्डमा फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) का माध्यमबाट आईपी टिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
‘भ्याइस र इन्टरनेट सेवामध्ये कुनै एक लिएका तथा दुईमध्ये एउटा सेवामात्रै लिएका ग्राहकले पनि सो सेवा उपयोग गर्न पाउने छन्,’ प्रवक्ता जोशीले भने ‘यो टिभी जडान गर्नको लागि एफटीटीएच भने पुगेको हुुनुपर्नेछ । काठमाडौ र बनेपाबाट यो सेवा शुरु गरेपनि क्रमिक रुपमा एफटीटीएच पुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्दै लैजाने उनले बताए ।
विभिन्न राष्ट्रिय टिभी च्यानल तथा विदेशी च्यानलहरु सहित उपलब्ध भएको एनटिटिभी सेवा कम्पनीले प्रिमियम र बेसिक गरी दुई प्याकेज पनि विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । जसमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्याकेज छनोट गर्न सक्नेछन् ।
बेसिक प्याकेजको मूल्य (एक टिभी) प्रतिमहिना एक हजार २ सय ३०, ३ महिनाको ३ हजार ५ सय ३० र एक वर्षको शुल्क १३ हजार २ सय २० रुपैंया तोकिएको छ । यसमा १५ एमबिपिएस इन्टरनेट, निःशुल्क टेलिफोन र एनटिटिभी सेवा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै प्रिमियम प्याकेजमा प्रतिमहिना एक हजार ४ सय, तीन महिनाको चार हजार एक सय र एक वर्षको पन्ध्र हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
टेलिकमका अनुसार बेसिक प्याकेजमा एक टिभीको एक महिनाको लागि एक हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, तीन महिनाको लागि ३ हजार ५ सय ३० रपैयाँ र एक वर्षको लागि १३ हजार २२० रुपैया शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रिमियम प्याकेजको लागि १५ एमबीपीएस इन्टरनेट र एनटीटीभीसहित टेलिफोन फ्रिमा एक महिनाको लागि एक हजार चार सय, तीन महिनाको लागि ४ हजार एक सय र १ वर्षको लागि १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ३० एमबीपीएसको इन्टरनेटमा एक महिलामा १७ सय ५०, तीन महिनाको लागि ५ हजार र वार्षिक १८ हजार एक सयसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । ४० एमबीपीएसको लागि एक महिनाको लागि २ हजार ५०, तीन महिनाको लागि ६ हजार र वार्षिक १९ हजार ७ सय शुल्क लाग्छ ।
सरकारी सार्वजनिक संस्थानको ६० एमबीपीएस इन्टरनेट, एनटीटीभीमा टेलिफोन फ्रिको सेवा लिनको लागि भने एक महिनाको लागि २४ सय ५०, तीन महिनाको लागि ७ हजार २ सय र वार्षिक २४ हजार ५ सय शुल्क तिर्नुपर्छ ।
एकभन्दा बढी टिभी प्रयोग गरिएको अवस्थामा थप शुल्क लाग्ने छ । एकभन्दा बढी टिभी थप्ने हो भने बेसिक प्याकेजको एक महिनाकोमा २ सय २६ रुपैयाँ, तीन महिनाको लागि ६ सय ७८ रुपैयाँ र १ वर्षको लागि २७ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ । त्उसैगरी प्रिमियममा मासिक ५ सय ९, त्रैमासिक १४ सय ४९ र वार्षिक ४८ सय ८२ रुपैया थप्नु पर्नेछ ।
कसरी हेर्न सकिन्छ टेलिकमको आईपी टिभि
टेलिकमले फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) का माध्यमबाट आईपी टिभी सेवा थप गरी ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । कम्पनीको एनटीटिभी सेवाका लागि एफटीटीएच नेटवर्कको पहुँच भने अनिवार्य हुनेछ । काठमडौं उपत्यकाभित्र सुन्धारा, बबरमहल, नक्साल, चावहिल, जोरपाटी, हात्तिगौडा, छाउनी, गोंगव, किर्तीपुर, बलम्बुमा सो सेवा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी पाटन, सैंबु, लुभु, ठिमी र काभ्रको बनेपामा पनि सो सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
उपत्यका बाहिर भने फाइबर पुगेको स्थानमा उक्त सेवा क्रमिक रुपमा बढाउँदै जानेछ । जसमा चितवन, धनुषा, मकवानपुर, पर्सा, सिन्धुली, घनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, डोटी, कैलाली, कन्चनपुर, धादिङ, बाँके, दाङका केही स्थानमा टेलिकमको फाइबर उपलब्ध रहेको छ ।
यसैगरी प्युठान, सुर्खेत, बागलुङ, कपिलबस्तु, कास्की, नवलपरासी, मुस्ताङ, नवलपरासी, पाल्पा, पर्वत, रुपन्देही र तनहुँमा समेत टेलिकमको एफटीटीएच नेटवर्क पुगिसकेको छ ।
हाल कम्पनीको एफटीटीएच सेवामार्फत भ्वाइस, डेटा वा दुबैै सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले एनटिटिभी सेवा प्राप्त गर्न नजिकैको नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा गएर सो सेवा लिन सक्ने छन् । एनटिटिभीका लागि ग्राहकले कम्पनीबाट एसटीबी (सेट टप बक्स) खरिद गर्नुपर्नेछ । उक्त बक्स ३५ सय रुपैयाँ तिरेर टेलिकमको कार्यालयबाट आम उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने छन् ।
कहिले पुग्छ ७७ जिल्लामा ?
यो सेवा काठमाडौं उपत्यकासहित ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्दै जाने टेलिकमले तयारी गरेको छ । आईपी टिभि सञ्चालन गर्न टेलिकमले पछिल्लो समय एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) इन्टरनेट सेवालाई जडानलाई तिव्रता दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुसमा सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार टेलिकमका एफटीटीएच ग्राहक दुई लाख ९१ हजार ३९९ रहेका छन् । हाल टेलिकमको एपटीटीएच सेवा ४९ जिल्लामा पुगेको छ ।
कसरी तिर्ने आइर्पी टिभिको शुल्क ?
टेलिकमले उपलब्ध गराउँदै आएको रिचार्ज कार्ड, अनलाइन तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट तथा टेलिकमको कार्यालय मै गएर आईपी टिभीको शुल्क तिर्न सकिने प्रवक्ता जोशीले बताएका छन् ।
सामसङ्ग डिजिटल प्लाजा अब गाईघाटमा
१० वित्तीय आरटीजीएसमा थपिए, फाइनान्सबाट ठूलो रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने
गरिमा विकास बैंकद्धारा “स्मार्ट टेलर”को शुरुवात
टेस्लाका पूर्व सफ्टवेयर इन्जिनियरले डाटा चोरेको आरोप
सामसङको एस२१ सिरिज नेपाली बजारमा, कति छ मूल्य ?
नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा १६ प्रतिशत बढ्यो, कस्ता देखिए अरु सूचक ?
आजसम्म शेयर होल्ड गर्नेले नेपाल लाइफको ५१ प्रतिशत लाभांश पाउने